IMac Pro Space Grey Zvishandiso zviri Kutengeswa Ipo Masheya Ekupedzisira | Ndinobva mac
IMac Pro Space Grey zvishongedzo zviri kutengeswa nepo zvigadzirwa zvichipera
Yakanga iri nyaya yenguva Apple asati asarudza kubvisa iyo grey accessories izvo zvinofambidzana neyekuyeuchidza iMac Pro kubva kune yayo yekutengesa runyorwa. Iyo kambani yakafunga kuti yakanga yave nguva yekuti grey iMac inyangarike kubva mukutengesa kuti itore nzira yemamodheru matsva. Iye zvino zvishongedzo zvako izvo inogona kutengwa zvakasiyana zvakare mazuva avo akaverengwa.
Kana iwe uchida nzvimbo yeyera grey iwe unofanirwa kutora mukana, nekuti Apple yasarudza kuti inguva yezvinhu zvekushandisa mune iro vara uye izvo zvaiperekedza iMac Pro, vanotambura nedambudziko rakafanana nekombuta. Nenzira iyi iwe unogona chete kuwana imwe ye izvi zvishongedzo apo masheya anogara. Sezvatinoona mune mbeva, keyboard kana trackpad peji rekutengesa Mune iwo mavara, isu tinonyeverwa kuti panguva ino tine zvikamu zvekutengesa, asi kana sitoko yapera, tinogona kungozvitenga kuburikidza nevechitatu mapato kana wechipiri-ruoko.
Idanho rinodiwa, zvichitevera kudzimwa kwekombuta yako yeMac Pro .. Kana aya mavara atengeswa, anongowanikwa mune sarudzo yesirivheri.
Apple iri kusiya nzvimbo yemamodeli matsva vanofanirwa kuuya kuzotsiva mhando dzekare. IMac Pro yaive yemumwe wevakatanga kubatwa uye izvozvi zvishongedzo zvemavara akafanana zvinotambura zvakafanana. Isu tinofanirwa kupa nzira kune ramangwana, kune iMac nyowani ine M1 yatinotova nayo yemhando pamusika uye mune akasiyana mavara uye zvishongedzo kuti zvifanane. Yakanyanya Apple maitiro, iine zvese zvinoenderana uye mune iwo chete mavara. Chinhu icho pasina mubvunzo chichava zano rakanaka reramangwana iMac Pro.
Parizvino kana iwe uchida kana kuda zvinhu mune iyo nzvimbo grey vara, usazeze uye uzviwane izvozvi, vasati vapera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » IMac Pro Space Grey zvishongedzo zviri kutengeswa nepo zvigadzirwa zvichipera
Hack AirTags, ipa MacBook Mhepo uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
AirTag inotsvaga bhasikoro mune yekufananidzira kuba